ढोरपाटनका बाढीपीडितलाई सहयोगका लागि कपिलवस्तुमा समिति गठन
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार १७:३९ २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १७:३९ २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १७:३९
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित भुजीखोलामा अघिल्लो बुधबार आएको बाढीबाट पीडित परिवारलाई सहयोगका लागि कपिलवस्तुमा समिति बनाइएको छ । बागलुङबाट बसाइँ सरी कपिलवस्तु आएका स्थानीयको सक्रियतामा राहत सङ्कलन गर्न लागिएको राजमो कपिलवस्तुका नेता एवम् समितिका संयोजक केरसिंह अदैले जानकारी दिएका छन् ।
समितिमा नयाँबस्तीबाट जुद्धबहादुर कार्की, बुद्धभूमि मानपुरबाट तुलसी बोहरा, इमलियाबाट तुलसिंह थापा, शिवपुर मधावाबाट झकबहादुर विक, जिनुवाबाट भक्तबहादुर भण्डारी, ४ नं. जीतपुरबाट दलबहादुर कुँवर, गजेहडाबाट भविलाल गौतम, रहनुभएको छ । नौ सदस्यीय समितिमा एकजना पछि थप गरिने छ ।
समितिले यही भदौ २६ गतेदेखि राहत सङ्कलन सुरु गरिने छ । सो सहयोग पारदर्शी तरिकाले पीडितको हातैमा पुर्याउने जानकारी दिँदै संयोजक अदैले सहयोगका लागि सबैसँग आग्रह गरेका । संकलन गरिएको राहत सामाग्री सम्बन्धीत क्षेत्रमै लगेर वितरण गरिने पनी अदैले बताए ।
कपिलवस्तुमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुग्यो, थप १ जनाको ज्यान गयो
कपिलवस्तुमा सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई १३ वर्षपछि सुरक्षित आवास